अमेरिकामा मतदान जारी, नेपाली अमेरिकन सहभागी, कहाँ के हुँदैछ ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकामा मतदान जारी, नेपाली अमेरिकन सहभागी, कहाँ के हुँदैछ ?
अमेरिकाको मध्यावधी चुनावमा सबै ४३५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु र एकसयमध्ये ३५ जना सिनेटरहरु छान्न मतदान भइरहेको छ । आजको चुनावबाट ५० जनामध्ये ३६ राज्यका गभर्नरहरु पनि छानिने छन् ।
प्रतिनिधिसभामा नियन्त्रण कायम गर्नका लागि डेमोक्र्याट्सहरुले कम्तीमा २३ रिपब्लिकनहरुको पकड तोड्न जरुरी छ भने सिनेटमा नियन्त्रण कायम गर्नका लागि कम्तीमा २ जना रिपब्लिकनको पकड क्षेत्रमा जित्न जरुरी छ । आजको चुनावलाई धेरैले राष्ट्रपति ट्रम्पको जनमतसंग्रहका रुपमा समेत लिएका छन् ।
पहिलो मतदान अमेरिकाको न्युयोर्क समय अनुशार बेलुका ६ बजे बन्द हुनेछ । त्यसपछि चुनावमा परिणामहरु र अनुमानहरु ऋाउन थाल्नेछन् ।
आजको चुनावमा अमेरिकन नागरिकताप्राप्त नेपालीहरुपनि उत्साहपूर्वक सहभागी भइरहेका छन् । अमेरिकामा झण्डै ४० हजार नेपालीले त्यहाँको नागरिकता लिएर मताधिकार प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै मेरिल्याण्ड राज्यको डेलिगेट्समा नेपाली अमेरिकन ह्यारी भण्डारीपनि भिडिरहेकाले नेपालीहरुमाझ आजको चुनाव थप चासोको विषय बनेको छ ।
मतदानमा जानेहरुका लागि आज लिफ्टले भोट डट अर्गमार्फत राइडमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उबरले १० डलरसम्म छुट दिएको छ । डलास, ह्युस्टन, तम्पा, लस एन्जलस लगायतका कैयन शहरमा सार्वजनिक यातायात निशुल्क गरिएको छ ।
न्युयोर्कको बु्रकलिनमा मतदानका क्रममा मतदाताहरु झण्डै डेढघण्टा बाहिर परेका छन् । विहान ६ बजे खुल्ने मतदान स्थल साढे ७ बजेसम्म खोल्न नसक्दा मतदानस्थलमा पुगेका मतदाताहरु बाहिर परेका हुन् । ब्रेउकेलेन कम्युनिटी सेन्टरमा लगाइएको विद्युतीय ताला समयमा खोल्न नसक्दा मतदान ढिलो सुरु भएको हो ।
रोढ आइल्याण्डका मतदाताहरुले आफ्नो मतदानस्थलबाट गलत जानकारी प्राप्त भएको भन्दै ट्वीट गरेका छन् । केही थर्ड पार्टी एप्लिेकशनमार्फत मतदान स्थलबारे गलत जानकारी पाएको मतदाताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मिसिसिपी नदिदेखि पूर्वका केही क्षेत्रमा आज मतदानका क्रममा वर्षाहुनसक्ने जनाइएको छ । पश्चिमी न्युयोर्कदेखि अलाबामासम्म बर्षा र आँधीको सामना गर्नुपर्ने मौसमविदको चेतावनी रहेको छ । फिलाडेल्फिया, नर्थ क्यारोलिना, वासिंटन डिसी लगायतका क्षेत्रमा पनि बर्षा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
टेनेसीको नोक्सभिलमा विद्युत आपूर्तीमा अवरोध उत्पन्न हुँदा मतदाताहरुले बाहिरै कागजमा मतदान गरिरहेका छन् । ब्याकअप जेनेरेटरले पनि काम नगरेपनि कागजमा मतदान गर्नुपरेको हो ।